သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အခြေခံပြီး ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ အတူတကွနေထိုင်ရေးနှင့် ဒုက္ခသည်များအား မျှတစွာ အတူနေရာချထားရာတွင် ဟန့်တားမှုများကို တားဆီးချေမှုန်းရေး တင်ပြခြင်း
(၁) နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးတွင် အနောက်သား ရခိုင်တို့၏ အကြမ်းဖက် မှုကြောင့်နိုင်ငံတ ကာ အလယ်တွင် ယုံကြည်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဟန့်တားမှုဖြစ်စေသော မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ ဆန်မှုကို ခွင့်မ လွှတ် နိုင်သော ကျူးလွန်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ကျောက် တင်ပါ၏။
(၂) ထိုနည်းတူ သမိုင်း ကြောင်းအရ အတူတကွ နိုင်ငံတော် တာဝန်ကို ပါဝင်ဆောင်ရွက် လာခဲ့သော ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ တို့၏ တန်းတူ ညီမျှသော လူ့အခွင့် အရေးများကို စစ်အာဏာရှင် မဆလပါ တီခေါင်းဆောင် နေ၀င်း မှဦးဆောင်၍ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံသား ဗိုလ်မှူးကျော်မောင်အားပြည်နယ် တာဝန်ခန့်ပြီး ရခိုင်လူမျိုးကြီးဝါဒဖြင့် သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့သလို ယခုတဖန် အနောက်သား ရခိုင် အုပ် စုခေါင်း ဆောင်ဖြစ် သော အေးမောင် တို့ကလည်း အကြမ်း ဖက်မှု တစ်ခု ဆင်ပြီးသွေးခွဲနေ သည် မှာ ထင် ရှားနေ ပါ သည်။
(၃) ယခု တဖန်ပြည်နယ်တွင် သွေးခွဲမှုနည်း လမ်းသစ် တစ်ချို့ကျင့်သုံးလျက်ရှိ ရာနိုင်ငံတော်မှ အသိအ မှတ်ပြုစေ လိုပါသည်။
(က) ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အတူတကွ မနေထိုင်လိုကြောင်း ရာဇသံဖြင့်ဒေသ ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အား ခြိမ်း ခြောက်ခြင်း
(ခ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ရခိုင်နှင့်မျိုးနွယ်စု များကို ဥပဒေမဲ့ ဖိတ်ခေါ်၍ အခမဲ့နေအိမ်နှင့် လယ်ယာမြေ များထောက်ပံ့ ကာလက်ရှိ ဒုက္ခသည်အား မငဲ့ညှာခြင်း
(ဂ) အကြမ်းဖက်မှုတွင် ဒုက္ခသည် ရခိုင်အုပ်စုများအား ခွဲထုတ်၍ ဆတ်ရိုးကျချောင်းဘေး စက်မှုဇုံတွင်နေ အိမ်ပေါင်း ၆၉၉ အိမ်ဆောက်ပေးနေခြင်း
(ဃ) လူမျိုးခွဲခြား စစ်တမ်းကောက်ခြင်းနှင့် လူမျိုးမှန်အား တင်ပြခြင်းကို ဖီဆန်၍ အတင်း ဘင်္ဂလီ ဟုရေး မှတ်ခြင်း၊ မရလျှင် မတရားနှိပ်စက်ခြင်း၊ ငွေညှစ်ခြင်း၊ သည်းမခံနိုင်လျှင် တိုင်းတပါးသို့ ထွက်ပြေးရန် ဖန် တီးပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
(င) ရခိုင် အကြမ်းဖက်အရေးသည် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုဟု မယူဘဲ လူမျိုးစု များနိုင်ငံသားဖြစ်တည်ရေး၊ မတည်ရေး ဟူသော မှားယွင်းသော ယူဆချက်ဖြင့်လျှောက် လှမ်းပြီးဒေသ လုံခြုံရေးကို ထိပါးနေခြင်း
(၄) ရိုဟင်ဂျာသည် ဥပဒေကြောင်းနှင့် အညီတရား ၀င်နိုင်ငံသားဖြစ် လင့်ကစား လ၀က၀န်ကြီးမှ ရိုဟင်ဂျာ သည်နိုင်ငံသားမဟုတ်သော် လည်းနိုင်ငံမဲ့ မဖြစ်စေ လိုသောကြောင့်နိုင်ငံ တွင်းနေထိုင်ခွင့်ပေး ထား ခြင်း ဟူသောဥပဒေ မဲ့ပြောဆိုနေခြင်း စသည်တို့သည် ဥပဒေကြောင်း အရအန္တရာယ်ဆိုးနှင့် ရင်ဆိုင် ရမည် ဖြစ် သည်။
(၅) ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်သည် ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ဦးထိပ်ထားလျက် ရခိုင် အကြမ်းဖက်မှုတွင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပါဝင်ဆက်နွယ်လျက် ရှိသော ထိပ်တန်း (၁၀) ဦးကို အမှုတွဲဖြင့် မှတ် တမ်းတင် ထားပါသည်။
(ခ) အနောက်သား ရခိုင်ဒေါက်တာအေးမောင် (ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးမြေပေါ်ခေါင်းဆောင်)
(ဂ) ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းမြတ်နိုင် (စစ်ဦးစီး) ရခိုင်သူပုန်အဖွဲ့ – ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးမြေအောက်ခေါင်းဆောင်
(ဃ) မှူးဇော် (ခ) ဦးဇော်ဌေး (သမ္မတရုံး) – သတင်းလိမ်ညာလှည့်စားမှု
(င) ဦးခင်ရီ (လ၀က၀န်ကြီး) – မဆလဥပဒေဖြင့်ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်း
(စ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး (နယ်စပ်ဒေသရေးရာဝန်ကြီး) – လူမျိုးစုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း
(ဆ) ဦးဝင်းမြိုင် (ရခိုင်ပြည်နယ်ရုံး) – သတင်းလိမ်ညာလှည့်စားမှု
(ဇ) မောင်တောနစကမှူး (ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်နိုင်) – သွေးစုတ်ငွေညှစ်နှိပ်စက်ခြင်း (ယခုထောင်ကျပြီ)
(ဈ) ကိုကိုကြီး (၈၈ ကျောင်းသားအမည်ခံ) – သမိုင်းမသိ၊ လူမျိုးမသိဘက်လိုက်ခြင်း
(ည) ဦးညီပု (RNDP ကျောက်နီမော်တာဝန်ခံ) – ၁၀ လောင်းပြိုင်သတ်ဖြတ်မှုဖန်တီးခြင်း
(၆) တဖန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့သည့် အတိုင်း ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ကွဲပြားခြားနားသော အရေး ကို ဥပဒေ ကြောင်းပေါ် အခြေခံ၍ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု ကို နားလည်မှု ရယူပြီး၊ သေနတ်ကျည် ဆံများဖြင့် ဘက်လိုက်မှုများရှောင်လွှဲပြီး ကိုင်တွယ်လိုပါကြောင်း ဟူ၍လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ် ထားသော ရခိုင်အရေး ဖိုရမ်တွင်လည်း ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ပါတီခေါင်းဆောင် များနှင့် မြန်မာမွတ်စလင် ခေါင်းဆောင် များပူးတွဲ ပါဝင်စေပြီး၊ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဒုက္ခသည် ဘ၀မှ ကယ်ဆင်ရေး၊ သူ့မြေ၊ သူ့ အိမ်သို့ ဦးစားပေး ကာနှစ်ဖက်နားလည်မှုဖြင့် လုံခြုံမှုရှိသောပြည်နယ် သစ်ကြီး ကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဟုယုံ ကြည် ပါ သည်။
(၇)တဖန်နိုင်ငံတော်သည် လွတ်လပ်ရေးရပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့သော အစိုးရ အဆက်ဆက်၏ မှတ်တမ်း ဆင်ခဲ့ သောတိုင်း ရင်းသားအရးကို အစဉ်လေးစား ကျင့်သုံးရေးနှင့် ယခု လွှတ်တော်သို့ တင် သွင်း နေသော အေး မောင်၏ တင်ပြချက်တွင် ယခင်အစိုးက မှားခဲ့ပါသည်။ နယ်စပ်မှာ တံခါးမရှိ၊ ဓါး မရှိ ဟူ၍ စွပ်စွဲမှုကို နား ယောင်လွဲ မှားမှုမှရှောင်လွဲစေပြီး၊ ယနေ့ နယ်စပ်တံခါးမှ ဘင်္ဂလား ရခိုင်များ ဥပဒေ မဲ့ မည်သို့ဖောက်ထွင်း ၀င်လာနေ သည်ကိုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ဟူသမျှချိတ်ပိတ်သလို အန္တရာယ်ကြီး ပင်တွေ့မြင်ရသည်။
ဤသို့ နိုင်ငံတော်၏ စေတနာဖြင့် ဥပဒေကြောင်းပေါ် မူတည်၍ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အရေးကိုဖြေရှင်းရာ တွင် ဦးစွာ ဒုက္ခသည်များကို သူ့အိမ်၊ သူ့မြေနေရာချထား ပေးနိုင်မှ သာနားလည်မှုနှင့် လုံခြုံမှု ရှိအောင် ဖန်တီး မည်ဟု ယုံကြည်မိ ပါ သည်။ နေရာ ချထားပေးခြင်း ကြန့်ကြာနေမှုသည်ပြဿနာ အားမီးမွှေး သလိုအားပြင်း လာပြီး ၂၀၁၃ တွင် ထပ်မံစိုးရိမ်နေကာ အနီးကပ် ရန်သူအား ရှာဖွေတားဆီးချေ မှုန်းရေးနှင့် လက်နက်အား ကိုးပုဆိန်ရိုးမှ ကာကွယ်ရေးကို အလေးအနက် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
National Foundation BKK
၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၁)
This entry was posted on February 11, 2013, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့အဆိုကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြပြီး ဆွေးနွေးဖို့လက်မခံခဲ့တာလဲ? …
Nearly 1,000 Muslim Rohingyas incarcerated in Arakan state →